Ilhaan Cumar oo weerar kala kulantay taageero ay u muujisay shirkadda Hormuud - Bandhiga Media
Ilhaan Cumar oo weerar kala kulantay taageero ay u muujisay shirkadda Hormuud
Press room September 12, 2019
Wargeysyo ka soo kala baxa Israa’iil iyo Maraykanka, oo ay ka mid yihiin, The Times of Israel iyo Judicial Watch ayaa Ilhaan Cumar ku cambaareeyay in ay “taageertay Hormuud”, ayna ciidamada nabad ilaalinta ka dalbatay in la ilaaliyo shirkadda iyo isgaarsiinta Soomaaliya.
Afahyeenka dowladda Kenya, Cyrus Oguna, wuxuuna ka gaabsaday in uu ka hadlo eedahaas uga yimid dhanka dowladda Soomaaliya iyo Shirkadda Hormuud.
Balse shirkadda ma oga sababta loo burburiyo xarumahooda xudduudda ku yaalla wuxuuna madaxa warfaafinta ee Hormuud sheegay “Waa marmarsiiyo ammaan, innaga siyaasiyiin ma nihin, waxaan nahay dad shacab oo ganacsato ah “.
Isgaarsiinta Hormuud waxaa laga adeegsanaa inta badan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxayna sheegayaan in aysan jirin cid ay la leeyihiin xiriir dhanka amniga ah”.
“Wax xiriir ah oo nalala soo sameeyay ma jiro, cid aan dhibaato ku hayno ma jirto, ma garaneyno sabab ay noogu marmarsiyoon karaan,” ayuu yiri Muxiyadiin Xasan Cosobow, Agaasimaha warbaahinta iyo suuq geynta ee shirkadda Hormuud.
Dhageyso: Maxaa ka jira in Maqaamka Caasimadda Hirshaballe laga wareejinayo magaalada Jowhar?
Booliska Soomaaliya oo kawar bixiyay shabakad caruurta xadda oo gacanta lagu dhigay